China Lipgloss na-ere omenala egbugbere ọnụ gloss onwe labelụ ude creamy lipgloss ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Mma Mma
Lipgloss mgbere omenala egbugbere ọnụ gloss onwe labelụ diy creamy lipgloss
Anụ na-abụghị nke nnyapade egbugbere ọnụ glossan & arụrụala, were were na-egbu maramara. Moisturizes na egbugbere ọnụ na vitamin na Shea butter.
Egbugbere ọnụ anyị bụ glossan & arụrụala n'efu, nwere ederede dị nro, nke na-abụghị nke nnyapade na egbugbere ọnụ, Mmiri na-egbu maramara.
Egbugbere ọnụ a bara ọgaranya na Vitamin E, nke na-echebe egbugbere ọnụ n'ụzọ dị irè, na-eme ihe nkiri na-echebe mmiri, na-egbochi mmiri mmiri, na-ebelata akara ndị dị mma na egbugbere ọnụ akọrọ na ịkpụcha. Weghachi egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ, mee ka egbugbere ọnụ dị nro ma dị mma, ma nwee mmetụta jupụtara na mmiri.
Adabara ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi nnọkọ, ejiji na-egosi, kwa ụbọchị iji na na. Obere obere na-enye gị ohere ịchọ mma egbugbere ọnụ gị n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla. Dị 65 dị iche iche nwere ike jikọta ya na ụdị etemeete dị iche iche, oge na agba akpụkpọ.
Nkebi Aha Egbugbere ọnụ gloss
4. Na-egbu maramara
A: mbụ, ka anyị mara gị chọrọ banyere ihe, mgbe ahụ, anyị ga-enye aro ya ma na-enye e kwuru, ngụkọta anyị nwere 65 na agba maka anyị egbugbere ọnụ gloss. Ozugbo ihe niile zuru ezu nwere ike izipu ihe atụ. A ga-akwụghachi ụgwọ nlele ma ọ bụrụ na etinye iwu.
Nke gara aga: Ihe na-egbu maramara egbugbere ọnụ na-egbu maramara na-acha uhie uhie na-enweghị atụ
Osote: Gba ọtọ egbugbere ọnụ gloss onwe labelụ ịgba ọtọ glossy lipgloss vegan na obi ọjọọ free ịgba ọtọ egbugbere ọnụ glosses
kenkowaputa lipgloss nke onwunwu
egbugbere ọnụ gloss emeputa
egbugbere ọnụ gloss ere ahịa omenala
lipgloss na-ere ahịa omenala
lipgloss N'ogbe mba labeelu na nzuzo
onwe labeelu egbugbere ọnụ plumper
shimmer egbugbere ọnụ gloss
shimmer egbugbere ọnụ gloss onwe labeelu
egbugbere ọnụ lipgloss
egbugbere ọnụ gloss ere ere onwe labelụ plumper glos ...
Kenkowaputa lipgloss onwunwu lipgloss N'ogbe mba lab ...
Clear egbugbere ọnụ gloss onwe labelụ N'ogbe doro anya l ...